Ukuphupha ngendlebe Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ziza zinkulu okanye zincinci, zixinene okanye ziphume, zikhombe okanye zijikeleze: iindlebe zethu. Ilungu leemvakalelo likho ukubamba amaza esandi, ukuhlalutya ingxolo kunye nokuyithumela kwingqondo yethu. Indlebe yomntu ikwanoxanduva lokulinganisa. Xa kuthelekiswa nomthamo wokuva kwezilwanyana ezininzi, ilungu leemvakalelo aliphuhlanga kakuhle: abantu abakwazi ukubona isandi esiphakamileyo njenge-ultrasound, umzekelo, kwaye oku akuyongxaki kwiindlebe zezinja, ihlengesi kunye namalulwane.
Abafazi bathanda ukuhombisa ngamacici amahle, isizukulwana esincinci namhlanje sikhetha ukolula iindlebe kwaye sizenze zibaluleke kakhulu kwaye zibambe ngamehlo oko kubizwa ngokuba yimigudu.
Kodwa nabani na okholelwa ukuba bajongene nentsingiselo entsha kulutsha lwethu ukude nayo. Kungenxa yokuba nakwiinkcubeko zamandulo, ezinje nge-Egypt, izidumbu ezinee-lobes ezihlaziyiweyo zafunyanwa. Kwaye ukuba ujonga umfanekiso oqingqiweyo kaBuddha, uya kuqaphela ukuba unendlebe enkulu kakhulu. Izilwanyana ezinje ngeendlebe okanye impama nazo zihlala zinxulunyaniswa neendlebe.
Kwiidolophu ezininzi, iindlebe zibonisa imeko ethile. Apha, uhlobo lobucwebe endlebeni okanye ukwandiswa kwee-lobes lubonisa imeko umntu anayo esiqwini. Kwezinye iinkcubeko ziyinxalenye yesiko lokuqalisa.
Kwakhona emaphupheni, uphawu lwephupha "oluviweyo" lumele iinkalo ezahlukeneyo. Funda yonke imiba yalo mfanekiso wephupha unomdla apha ngezantsi!
1 Uphawu lwephupha «indlebe» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Igazi lihla ngendlebe, oh hayi! Iphupha eloyikisayo
2 Uphawu lwephupha «indlebe» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «indlebe» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «indlebe» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «indlebe» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Igazi lihla ngendlebe, oh hayi! Iphupha eloyikisayo
Ukuba unegazi eliphuma endlebeni yakho kumava ephupha, kuya kufuneka uhlengahlengise kubunzima bokwenyani. Oleleyo kufuneka enze ngononophelo kwaye ngaphandle kokuzithemba okukhulu. Isenokuba sisilumkiso esinzulu xa igazi elisephupheni lisentsha ngokupheleleyo. Ke enyanisweni, umntu ophuphayo kufuneka azikhathalele ngakumbi ukukhusela ukugula ekugqibeleni. Ukopha kumjelo wendlebe kwi el mundo Ukulala kunokuba ngumceli mngeni wokumamela ngakumbi kwiimvakalelo zakho kubomi bokwenyani kwaye uzilinganise kunye nomxholo wakho.
Uphawu lwephupha «indlebe» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, umfanekiso wephupha "weva" usetyenziswa njengesicelo kuwo iimvakalelo nikela ingqalelo engakumbi - "yiviwe." Ukuba uphupha iindlebe ezinkulu kakhulu, ezifanayo nezipuni zomvundla, uya kuziva uvelwano kwiinkxalabo zakho kwaye uya kukunika "iindlebe ezivulekileyo."
Sula i-snooper yakho Atención Iyafuneka, kuba ilumkisa ngokuchasene nokunyeliswa. Kwakhona, uphawu lwephupha kule meko lumele isikhokelo sokumamela ngononophelo ngakumbi kwimicimbi ebalulekileyo kwaye ungathathi isigqibo ngokungxama.
Ukutolikwa okungakumbi komfanekiso wephupha "weva":
Iindlebe ezivaliweyo: zinokukwenzakalisa
Hlamba indlebe yakho kwaye ususe i-wax ezindlebeni zakho: lumka kumbandela othile obilisa umatshini wokuhleba
susa iinwele endlebeni nge-tweezers: kuya kufuneka unike ingqalelo iinkcukacha zento ethile
ukutsalwa yindlebe- oku kufanele kukukhumbuze ngesithembiso ekufuneka usigcinile
Iindlebe ezimile kakuhle-uya kufumana ulwaneliseko ebomini bakho
Iindlebe ezininzi: umqondiso woxinzelelo olukhulu kwindawo ekungqongileyo
iindlebe ezonzakeleyo - umntu uya kuba namava abuhlungu
Sika okanye unqumle indlebe: phelisa ubuhlobo.
Uphawu lwephupha «indlebe» - ukutolikwa kwengqondo
Indlebe njengomfanekiso wephupha ingabonisa ngokwembono yengqondo ukuba inokwamkela kakhulu Impembelelo Abanye abantu. Apha kufanelekile ukumamela kabini kwaye mhlawumbi ubuze imibuzo ngokunzulu ngakumbi ukuba into ekuhlebelweyo iyinyani. Mhlawumbi umntu ufuna ngabom ukufezekisa injongo ethile ngayo.
Kumava ethu ephupha, uphawu "lwendlebe" lunokubonakala njengomfanekiso omkhulu wokuva. Ukuba ubona ilungu lakho lokuva liphambi kwakho ngale ndlela ephupheni lakho, usenokuzivela ebomini bakho. Ngokusisiseko ukujongana nomphefumlo kulungile. Nangona kunjalo, akufuneki uzame ukuhlalutya yonke into ebonwa kweli nqanaba kwangoko ukuya kwezona nkcukacha zincinci.
Iphupha "lendlebe" linokulumkisa umphuphi ukuba angakhohliseki kakhulu kwaye akholelwe yonke into eziswa kuye evela ngaphandle, ngakumbi ukuba kukho into emsebezelwayo endlebeni. Isigulana kufuneka sisebenze kweyaso isikhundla zimele ngcono kwaye ungaphazanyiswa zezinye izimvo ngokukhawuleza.
Ngaphaya koko, amaphupha eendlebe anokubonakalisa iingxaki zempilo kwindawo yelungu lokuva. Apha kubalulekile ukuba ubandakanye imeko yakho ekutolikweni kwephupha.
Uphawu lwephupha «indlebe» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, uphawu lwendlebe lumele isihlalo sethu. Gedächtnisses. Kulapho iinkumbulo zendoda ziphumla khona, kunye nexesha lazo elidlulileyo kunye neziganeko ezingalibalekiyo kunye namava amenze ukuba abe yile nto ayiyo namhlanje.